Impilo | Eyedwarha 2021
Ukutya kwendalo ukonyusa ubungakanani bebele: Jonga olu luhlu lwee-17 zokutya
Ukutya okufana neemveliso zesoya, imbewu yefennel, ubisi, i-beetroots kunye neekherothi zine-phytoestrogen enokunceda ekukhuleni kwezicubu zamabele. Ihomoni estrogen kunye neprogesterone inoxanduva lokukhula kwamabele.
Ulahla njani i-Belly Fat Kwiveki e-1 Ngokwendalo Ekhaya
Ngenxa yolu suku lokuhlala phantsi kunye nokutya okungafanelekanga, akumangalisi ukuba ube nesisu esityebileyo. Funda ukuze wazi ukuba ulahlekelwa njani ngamanqatha esisu kwiveki e-1 ngokwendalo ekhaya.
Ngaba ufuna ukulahla amanqatha ethanga? Zama ezi zivivinyo zithandathu
Ukuzivocavoca okunje nge squats, squats wide, back / gluteus umlenze, ukuphakamisa umlenze osecaleni, ukukhaba iesile kunye nokuphakamisa umlenze wangaphambili kunokunceda ukunciphisa amanqatha emathangeni akho. Kodwa, kunye nale mithambo kufuneka ugcine ukutya okufanelekileyo ukukunceda ufezekise injongo yakho yokunciphisa umzimba.
Iindlela ezilula neziSebenzayo zokuNciphisa Amafutha ebusweni bakho
Ukunciphisa umzimba kunzima, ingakumbi kwiindawo ezithile zomzimba ezifana nobuso. Ukuqokelelwa kwamafutha kwiindawo zobuso kuyabonakala ngakumbi okunokuthi kube negalelo kubukhulu obukhulu, ukukhukhumala, ukujikeleza, ukuqina kunye nobuso obugcweleyo.
Eyona mithambo ilungileyo yokunyusa ubude bakho
Ukuphakama komzimba womntu kuneempembelelo ezivela kwizinto ezininzi ezifana nokusingqongileyo, iihomoni, imfuza kunye nokutya. Ukuzilolonga yenye yeendlela ezilungileyo zokunyusa ukuphakama.
Lumka! Iintsilelo ezili-13 zokutya okungafunekiyo mhlawumbi ubungazi
Ukutya rhoqo ukutya okukhawulezayo njenge-burger, i-pizza, kunye ne-pastries zonyusa umngcipheko wokutyeba kakhulu, isifo sentliziyo, umhlaza, isibindi kunye nokonzakala kwezintso.
Iindlela ezili-10 zokuThoba indalo kuBungakanani beBele
Ngokwemvelo ukunciphisa ubungakanani bebele ngoncedo lwezi ngcebiso zilula kunye namayeza. Ukuzilolonga kudlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni ubungakanani bebele lakho.
Ukutya oku-12 okuNciphise ubushushu bomzimba kweli hlobo
Njengokuba ixesha lehlobo liphezu kwethu, lixesha lokuba ulungiselele umzimba wakho kwaye unciphise ubushushu bomzimba. Nazi ukutya okumbalwa okunempilo okunokunceda ukunciphisa ubushushu emzimbeni. Bandakanya oku kutya kukutya okusehlotyeni ukuze uhlale usempilweni.
Itshathi yeentsuku ezingama-21 yokutya eIndiya yokuPhulukana nobunzima, yaBalimi
Nantsi itshathi yokutya efanelekileyo yokunciphisa umzimba. Oku kutya kweentsuku ezingama-21 kunceda bonke abatya inyama ekupheliseni ubunzima ngokukuko.
Lahla ukuya kuthi ga kwi-15 kg NgeTispuni enye yeLee Spice!
Ungasebenzisa ikumin okanye ijeera ukulahleka kwewonga kunye nokunyibilikisa amanqatha esisu. Nazi iindlela zokumangalela ijeera okanye ikumin ukunciphisa umzimba. Funda ukuze wazi ikumin ukunciphisa umzimba
Iindlela ezi-5 zokunciphisa ubungakanani bebele ngeYoga
Ezi yoga zibangela ukunceda ukunciphisa ubungakanani bebele. Zama le mithambo yeyoga yokunciphisa amabele ngokwendalo. Jonga ukuhla kwamabele ngeyoga.
USurya Namaskara: Mingaphi imijikelo ekufuneka yenziwe ngeSantya esiShedi esi-5 yeeKh
Naku ukuba mangaphi amaxesha umntu ekufuneka enze 'surya namaskara' ukuze aphulukane neekhilo ezintlanu ngenyanga!
Iindlela ezi-7 ezahlukeneyo zokutya ubusi bokunciphisa umzimba
Zininzi iindlela zokuphulukana nobunzima bomzimba kwaye enye indlela kukusetyenziswa kobusi. Kwinqaku yangoku, siza kujonga isihloko sobusi bokunciphisa umzimba, apho sijonga khona iindlela ezahlukeneyo onokusebenzisa ngazo ubusi ukunciphisa umzimba.
I-6 yeyona mithambo ilungileyo yePenile yokunyusa ubungakanani
Ngaba unengxaki kwigumbi lokulala ngenxa yesayizi yakho? Akufanele ukhathazeke ngayo kuba kukho umthambo we-penile wokunyusa ubungakanani, ukunceda ngokungasebenzi kakuhle kwe-erectile kunye nokonyusa ubunzima.
Izibonelelo ezili-10 zezeMpilo zokuSela Amanzi oBusi
Usenokuba uvile ngeenzuzo ezininzi zezempilo zobusi. Nangona kunjalo, uyazi ukuba kwenzeka ntoni xa usela amanzi obusi afudumeleyo rhoqo? Iglasi egcweleyo yobusi bamanzi inokunyusa ukungakhuseleki kwakho kwaye incede ukugcina impilo yakho ngeendlela ezahlukeneyo. Thatha ujongo.
Usuku lwaMazwe ngaMazwe lwe-Yoga 2019: I-10 ye-Yoga yokuSusa i-Belly Fat
Ukunqongophala kokuzilolonga kunye nendlela yokuphila ehleliyo inegalelo kuphuhliso lwamafutha emzimbeni wakho, anokulawulwa kwaye ancitshiswe ngeyoga.
Lahla isinqe kunye nengalo yamanqatha ngale Recipe elula yokubhaka isoda!
Ukuba ufuna ukunciphisa amanqatha aqokeleleke emathangeni nasezingalweni ngokwendalo, zama eli nyango.
I-Yoga Asanas yokunciphisa amathanga nasesinqeni
Ezi yoga asanas ziya kuthonsa kwaye zibumbe amathanga kunye nesinqe. Thatha ujongo.
Ndingayitya ibhanana ngaphandle kwesisu?
Ukutya iibhanana kunokwanelisa indlala kunye nokunyusa amandla akho. Kodwa ngaba ungatya ibhanana ungatyanga? Ewe nohayi. Oko kukuthi, ngelixa ungayitya nokunye ukutya, ungaze utye ibhanana yedwa kwisidlo sakusasa.
Unyango lwasekhaya oluyi-7 olwenzakalisa amabele
Ubudala obuthatha ityala phezu kwamanenekazi akho athandekayo? Kutheni ungazami amanye amayeza asekhaya asebenzayo ukubuyisela amabele akho kubuhle bawo? Thatha ujongo.
Iingcaphuno ezilungileyo kumhla wokuzimela kwe-india
iqanda kunye nemon yokukhula kweenwele
Imalpua iresiphi inyathelo ngenyathelo ngemifanekiso
kutheni intlanzi arowana ithathwa njengenethamsanqa
indlela yokunyamekela iinwele ebusika
amayeza asekhaya elusu oluske lwane